Sebenzisa i-Instagram Photography ukuthumela ngokuchanekileyo Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Sebenzisa iifoto ze-Instagram ukuthumela ngokuchanekileyo
Disemba 27, 2018 0 IiCententarios 1021
Indlela yokuthumela ifoto kwi-Instagram
Njengoko sele kukhankanyiwe, Instagram Yiyo ifoto yokwabelana ngesicelo. Liqonga leendaba ezentlalo elisekwe kumfanekiso. Ukwabelana ngeefoto kunye neevidiyo kuyinxalenye yamava e-Instagram.
Kubalulekile ukuba ujonge ukuthunywa kwegama lakho kwaye ujolise ekuphuhliseni isitayile sakho esahlukileyo nesaziwa kwangoko ngabo bonke abalandeli bakho. Kwesi sahluko, siza kuthetha ngaloo nto. Siza kukuxelela ukuba uzicacisa njani iinjongo zebrendi yakho kunye nendlela yokuphucula isitayile sakho.
Ukongeza, siza kukubonisa indlela Dibanisa iiposti ze-Instagram kunye nezinye iiakhawunti zeendaba zentlalo kunye nendlela yokusebenzisa ithegi yendawo.
Okokugqibela, siyakuwugqiba esi sahluko sinike ingxelo ngendlela yokubalisa ibali ngayo Ushicilelo lwe Instagram ukusebenzisa izihlokwana kunye nee-hashtag.
Ungakulibali ukuthunywa kunye nesitayile sohlobo lwakho
Khumbula ukuba iyintoni injongo yegama lakho kwaye ulisebenzise njengesakhelo sokwenza umxholo. Ukuba umsebenzi wakho kukubhengeza iimveliso, ke jolisa ekubonakaliseni iimveliso zakho. Ukuba imishini yakho kwi-Instagram yile yandisa ukugcwala kwiwebhusayithi yakhoQiniseka ukuba ushumeka amakhonkco kumxholo wakho.
Uhlobo lomxholo wakho, njengoko sele kukhankanyiwe, kufuneka lukhethe kuphela uphawu lwakho. Kufanele ukuba kubekho indalo eyaziwayo kwifayile yakho ukuze abalandeli bakwazi ukubona iimveliso zakho ngokulula.
Umzekelo, ukuba sele usebenzisa iseti ethile ye izihluzi zeefoto zakho, qhubeka uyisebenzisa kuba abasebenzisi bakho baya kunxibelelanisa ezi filtha kunye nophawu lwakho. Ke kwixa elizayo xa uskrolela iindaba zakho, uya kuyamkela ngoko nangoko ifoto yakho kunye nokuyekisa ukunxibelelana nomxholo okanye ukuthatha inxaxheba kwincoko. Unokusebenzisa enye yezi Amabinzana amafutshane okuhombisa iposi yakho.
Ukunxibelelanisa iiposti ze-Instagram kwezinye iiakhawunti
Ye mhlawumbi, lelona candelo libalulekileyo lakho Icebo le-Instagram. Qiniseka ukuba izithuba zakho ze-Instagram zihambelana nazo zonke iakhawunti kwi iindawo zokunxibelelana kwezentlalo kulapho uphawu lwakho lusebenzayo ngoku. Unokwabelana ngokuthe ngqo nomxholo wakho ngendlela yokhetho olulula lokwabelana nesicelo ngokwalo. Kwakhona Ngaba uyazi ukuba unokwenza imali nge-Instagram?
Oku kuqinisekisa ukuba isiseko sakho esandisiweyo sabalandeli beendaba zentlalo sinokunxulumana nesakho Umsebenzi we-Instagram, kwaye ubazise ukuba uphawu lwakho luku-Instagram nalo.
Unokwazisa iprofayile yakho ye-Instagram kwiphepha lakho le-Facebook. Ungabelana ngesithombe okanye ividiyo encinci ngesithembiso sokwazisa ukusasaza igama.
Kuyanceda ukugcina engqondweni ukuba ukudibanisa umxholo kubo bonke abasebenzisi bakho bezosasazo lweendaba kuya kukuvumela ukuba ufikelele kubaphulaphuli abakhulu kakhulu, kunye neendidi ezahlukeneyo zedatha yabantu, ngokunjalo.
Iimpawu zendawo zilula kakhulu ukunamathela kwisithuba se-Instagram. Ngamanye amaxesha, i-iOS okanye iikhamera ze-Android ziye zenza iinkonzo zendawo ngeGPS. Kodwa ukuba unqwenela, ungafaka ngokwakho ngesandla indawo ngaphambi kokuba uyipapashe.
Indawo ifanelekile ukuba ishishini lakho lityala lokutyela okanye ivenkile. Ngale ndlela abantu bangathobela indawo yevenkile yakho Iprofayile ye-Instagram. Ukongeza, bonke abathengi bakho ababelana ngamava esitolo baya kuqokelelwa kwindawo enye.
Ifoto yome ngokumangalisayo, ngaphandle kwamabali. Ayibandakanyi ababukeli. Sebenzisa indawo yesihloko kwi-Instagram Ngaphantsi kwefoto nganye yabelana ngobulumko nangendlela ekhangayo. Sebenzisa ii-hashtag eziza kongeza kwincoko. Imibhalo engezantsi iya kubonelela ngomxholo wakho, kwaye iya kuyenza ukuba ibonakale ukuba ungasebenzisa i-emoji ngobukrelekrele. Unokusebenzisa enye yezi amabinzana amahle e-Instagram.
Khumbula ukuba, ngokuyintloko, inqaku lembali limele ukubalisa ibali.
Kulindeleke ukuba azalise izikhewu kubali ukuba ipeyinti ihlasele ngqo. Ikwayindlela elungileyo yokudibanisa neyakho hashtags kwaye ubenze babe nentsholongwane ngokwenza kubo uphawu lwabo. Ke ngoko, xa umsebenzisi abelana ibali elifanayo, uphawu lwabo lingongezwa kwincoko.
Xelela ibali ngeefoto kunye nevidiyo ilula Isenokubonakala imangalisa ekuqaleni, kodwa umxholo ulula kakhulu. Kuya kufuneka ubambe umzuzu ochazayo ophuhlisa ukubalisa ngokwawe.
Ukuba uphawu lwakho yinkampani yeinshurensi yobomi, unokufuna ukugxininisa amaxesha axabisekileyo okonwaba abantu bakho abaza kuyamkela xa bejonga emva. Ukongeza eli bali, ungapapasha uthotho lweefoto ezibonisa intombazana itya iilekese zomqhaphu kwibala layo noyise, okanye into efanayo. Ukongeza, kunokwenzeka usebenzisa amabinzana othando kwi-Instagram Ukuba ufuna ukubonisa ukonwaba kwakho.
1 Indlela yokuthumela ifoto kwi-Instagram
1.1 Ungakulibali ukuthunywa kunye nesitayile sohlobo lwakho
1.2 Ukunxibelelanisa iiposti ze-Instagram kwezinye iiakhawunti
1.3 Ukubaluleka kokulebhelisha
1.4 Balisa ibali
Iindlela zokufumana abalandeli ngakumbi kwi-Instagram